Mantsina tsy laitra iainana ny eto Antsirabe, manaitra ny tompon’andraikitra ny mponina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Manomboka miavoavo indray ny fako eto an-tanànan’Antsirabe, efa tsy araky ny kamiaon’ny sampan-draharaha ara-teknika eny amin’ny voaria intsony ny mandraoka izany. Manampy trotraka mahatonga ny loto ihany koa ny fijojon’ny orana andro aman’alina, hany ka mifangaro ao daholo na ny fotaka na ny fako entin’ny rano miparitaka etsy sy eroa. Raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra misahana fanatsarana sy ny fikarakarana ny tanàna RANARISOA Maminirina anefa dia tsy misy antony tokony tsy ahavitana ny asa saingy ny indro kely dia tsy araka avokoa ny gazoalin’ireo fitaovana tokony hiasa ireo. Ary manoloana izay ihany, dia nanazava ihany koa ny tao amin’ny kaominina ambonivohitra Antsirabe fa misy ny fitaovana no najanona aloha, mandritra ny fotoana tsy voafetra satria mbola tsy niravona tanteraka ny olan’ny kaominina mikasika ilay fitakiana tambin-karama efa-bolana tsy voaloa. Mila hameno ny arabe mihitsy ny fako toy ny etsy Ampiaviana, izay toerana fijanonan’ireo taksi-brosy sy fisakafoan’ireo mpandeha. Arakaraka ny mampaloto ilay toerana anefa no toa vao maika hivarotan’ny olona hani-masaka sy hanaovany hotely vary mitsangana ; ary ny fofona sy ny lali-manga mipetapetaka eny ambonin’ny sakafo rehetra eny. Tokony handinika sy hitandrina ihany fa mora vidin’ny mikiraoba ; dimam-polo ariary no hividiananao paoma anankiray kanefa ny isan’ny mikiraoba bakiteria mipetaka aminy efa anarivony. Ankoatra izany, mila mitady vahaolana faran’izay haingana ny fanjakana fa fahavaratra ny andro ka mihanaka ny aretina azo avy amin’ny loto isankarazany, ary tsy ny eto Antsirabe irery ihany fa eran’ny Madagasikara mihitsy no lasibatr’io aretina io. Mba manao izay ho afany ihany manko ny sampan-draharaha ara-teknika sady miady irery ka miandrandra tosika avy amin’ny fanjakana mahefa. Ny tsirairay indrindra no voantso amin’ity fahadiovana ity, mbola misy ny minia tsy tonga saina na dia efa miharihary aza ny soratra fa tsy azo anaovana maloto ny sisin’arabe ary tsy azo atao ny manary fako eo amin’ny sisin’ny dabam-pako.
Fako atao zezika
Lafo tokoa ny vidin-jezika eto Antsirabe toy ny zezik’omby ary indrindra ny zezi-bazaha (urée, MPK,…) amidy eny an-tsena. Nahay nanararaotra ireto mpamboly ireto ka rehefa tsy nisy nandraoka ny fakon’Ampiaviana, dia nalain’izy ireo tamin’ny sarety. Masaka tsara ny fako efa ela nitobiana ka mety atao zezika. Nambaran’i Dadamano fa tena tsara ny vokatra nambolena amin’ny fako toy izao satria efa fanaon’izy ireo ny maka fako atao zezika tsy ialam-bola toy izao isan-taona. Na dia eo aza izany rehetra izany dia tsy mahalany firy amin’ny fako eto an-tanàna raha hanao zezika. Ary mahagaga mihitsy fa indray andro ihany no madio ny dabam-pako, fa mitombo isa-minitra ny loto sy ny karazam-pako miangona avy eo. Hatramin’izao dia izay mifoka rivotra maloto tahaka ny akaiky lavam-pako no andairan’ny aretina, fa ireo mihinana ny vokatra novolena tamin’ny zezi-pako mbola tsy nisy nitaraina naharary kibo na nivalana. Raha ny tetikasa novolavolain’ny TED (Terre et Environnement pour le Développement) eto Antsirabe, tamin’ny taona 2011 moa dia ny hamadihana ny fako ho lasa zezika biolojika sy ny fanaovana kapa an’ireny fatina solefanina sy lagira ireny ; saingy tsy tanteraka teto izany fa lasan’ny tanàna hafa. Ankehitriny, midobaika mameno tanàna fotsiny ny fako, manaratsy endrika ny renivohitra no manimba ny tontolo iainana. Tokony handray ny anjara tandrify azy avy ny tsirairay fa tsy hifampiandry manoloana ny toe-java-misy. Ny ahiana manko sao dia ho tara loatra amin’ny fibanjinana ny ho avin’ny taranaka amam-para ; mbola hiampy fako sy fahasimban’ny tontolo iainana indray ve ny takaitra navelan’ny rivo-doza ary manginy fotsiny ny kere any atsimo ? Tsy vao maika ho loza ny hanjo !